कोसी अस्पतालमा सिरहाका ४० वर्षीय काेराेना संक्रमितको मृत्यु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कोसी अस्पतालमा सिरहाका ४० वर्षीय काेराेना संक्रमितको मृत्यु
श्रावण २९, २०७७ देवनारायण साह
मोरङ — कोसी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत सिरहाको विष्णपुर गाउँपालिका–१ का ४० वर्षीय
कोरोना संक्रमित पुरुषको बिहीबार मृत्यु भएको छ ।
टाइफाइड, ज्वरो, खोकी र श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएर सिरहाबाट आएर बुधबार राति २ बजे अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएका उनको उपचारको क्रममा बिहीबार साढे ७ बजे मृत्यु भएको कोसी अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले बताए ।
अस्पताल भर्ना गर्ने क्रममा लिएको स्वाबको रिपोर्ट उनको मृत्युपछि कोरोना पोजिटिभ आएको डा. यादवले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ २०:२९
कपिलवस्तु अस्पतालका मेसुसहित १८ जनामा कोरोना
कपिलवस्तु — तौलिहवास्थित जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसहित ३ चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
साउन २६ गते अस्पतालका ९१ जनाको स्वाब संकलन गरी जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा परीक्षण गर्दा १८ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।
ओपीडी, ल्याब र इमर्जेन्सी फाँटका स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पुष्टि भएको छ । त्यस्तै, काउन्टर र प्रशासन फाँटका कर्मचारी पनि संक्रमित पाइएका छन् । अस्पतालका चमेना गृह सञ्चालक पनि संक्रमित भएका छन् । १३ जनाको अझै रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
साउन २५ गते पनि अस्पतालका ५ जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टदेखि अस्पताल सिल गरिएको छ । इमर्जेन्सी सेवाबाहेक सबै सेवा अर्को सूचना नहुँदासम्मका लागि बन्द गरिएको छ । जिल्लामा हालसम्म ९ सय १ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये १ जनाको कोरोनाले मृत्यु भइसकेको छ । सक्रिय केस १ सय ३८ जनाको रहेको छ ।